Ithegi: ixesha | Martech Zone
Ukusebenza neenkampani zetekhnoloji, ndiyamangaliswa kukuba bangaphi abamba amaqonga abo kwiiNkonzo zeWebhu zeAmazon (AWS). INetflix, iReddit, iAOL, kunye nePinterest ngoku ziqhuba iinkonzo zeAmazon. Nokuba iGoDaddy ihambisa uninzi lwezixhobo zayo apho. Isitshixo sokuthandwa kukudityaniswa kokufumaneka okuphezulu kunye nexabiso eliphantsi. I-Amazon S3, umzekelo, yenzelwe ukuhambisa ukubakho kwe-99.999999999%, kukhonza izigidi ngezigidi zezinto kwihlabathi liphela. IAmazon idume ngokuxabisa amaxabiso
Siyawuthanda umxholo onokutya okunokuthenjelwa nje ngomntu olandelayo, kodwa ndiyakholelwa ukuba kukho ukungaqondi kakuhle kumzi mveliso wethu. Uluvo lokuba ukuthathelwa ingqalelo kuyancipha kufuna umxholo othile ojikelezwe kuyo. Okokuqala, andivumi kwaphela ukuba abantu bachitha amandla amancinci bezifundisa malunga nesigqibo sabo esilandelayo sokuthenga. Abathengi kunye namashishini achithe ixesha elininzi ngaphambi kokwenza uphando asenza uphando oluninzi ngoku. Ndibaleke iingxelo zohlalutyo
Zonke iikhontrakthi zethu kunye nabaxumi bethu ziingxoxo eziqhubekayo zenyanga. Kunqabile kakhulu ukuba silandele iprojekthi esisigxina kwaye phantse soze siqinisekise maxesha. Oko kunokuvakala kuyinto eyoyikisayo kwabanye kodwa umba kukuba injongo ayifanelanga ukuba ibe ngumhla wokukhutshwa, kufanele ukuba ibe ziziphumo zeshishini. Umsebenzi wethu kukufumana iziphumo zeshishini kubaxhasi bethu, hayi ukuthatha iindlela ezimfutshane ukwenza imihla yokuphehlelelwa. Njengoko Healthcare.gov ifunda, yindlela leyo